Ukulungisa ukuphawula okubhalwe nguwe - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ukulungisa ukuphawula okubhalwe nguwe – isihloko sosizo
Ukulungisa ukuphawula okubhalwe nguwe
Ukuze ulungise ukuphawula kwakamuva:
Iya kokuthi Iphrofayili > Ukuphawula
Khetha Ukuphawula kwakho
Iya ekuphawuleni ofisa ukukulungisa
Thepha Iphrofayili nokuthi Shintshela ekubungazeni
Thepha ukuphawula ofisa ukukulungisa
Umphakathi wethu uthembele ekuphawuleni okuthembekile, okungagwegwesi. Ababungazi nezivakashi babhala ukuphawula uma ukuhlala sekuphelile.
Inkathi yokubhala ukuphawula
Unezinsuku ezingu-14 ngemva kokuphuma ukuba ubhale ukuphawula ohambweni. Ungathumelela noMbungazi wakho inothi usebenzisa imiyalezo yakho ye…
Ngingakwazi yini ukushiya ikuphawula uma umbungazi ekhansele indawo engiyibhukhile?
Uma kuphakama izimo, futhi umbungazi wakho ekhansela ukubhukha kwakho, kunezindlela ezimbalwa ezitholakalayo zokubhala ukuphawula.